स्कूल वार्षिकोत्सव परिदृश्य
घर र परिवार, बिदाहरू
"विद्यालय समय र मौसम सबै नरक हामी कोर्ट छन् गर्न गायब ..."। गीत याद छ? यी वर्ष सम्बन्धित धेरै सम्झनाहरु ... पहिलो प्रेम, पहिलो अनुभव, भ्रमणहरू, फूल ... अनि, पाठ्यक्रम, हामीलाई घेरने भन्ने हाम्रो शिक्षक भएको न्यानोपन र प्रेम छ।
हाम्रो पहिलो शिक्षक। सबै भन्दा राम्रो, को kindest। यसलाई हामी पढ्न मात्र होइन र लेख्न, तर पनि खराब असल भेद गर्न, राम्रो र नराम्रो पहिचान गर्न हामीलाई वरिपरिको विश्व प्रेम गर्न सिकेका छन् उहाँलाई धन्यवाद छ।
कति स्कूल को 10 वर्ष भन्दा बढी भएको छ। र उहाँले अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ थिएन भने पनि सबैलाई, अझै पनि उनको एक मुस्कान र मेरो हृदयमा दुखाइ को एक बिट संग, स्कूलमा हामी हुर्केका र मानिसहरू भएका छन् किनभने बिर्सनुहुन्न।
लिपि को वार्षिकोत्सव विद्यालय हामी यसलाई अनुभव सबै भावना व्यक्त गर्न विशेष गरी राम्रो हुनुपर्छ। यी सुझावहरू पालन गर्ने प्रयास र सबै ठीक हुनेछ!
यदि यो thirtieth वा पचासवां छ, पाठ्यक्रम, स्कूल को वार्षिकोत्सव लागि दृष्य जहाँसम्म तिनीहरूले सम्झना र घर मा प्रतीक्षा गर्दै छन् कि खुसी हुनेछ किनभने, बाहिर स्कूल को धेरै मुद्दाहरू, जो पहिले नै त्यहाँ काम छैन शिक्षकहरू पाउन आमन्त्रण गर्न प्रयास गर्न, विचार गर्न आवश्यक छ।
अब वार्षिकोत्सव संग लिपि भन्दा लाग्छ स्कूल। पहिले, तपाईं एक छुट्टी लागि भेला हुनेछ कति अतिथि बुझ्न आवश्यक छ। तिनीहरूलाई धेरै र सबै हल मा सङ्कलन भने काम गर्दैन, त्यसपछि हामी परिवारको लागि एउटा सानो छुट्टी स्टेज गर्न सक्नुहुन्छ, र त्यसपछि उत्सव नै चिनो हुनेछ केही विशाल हल भाडामा। कोठा र सजावट सानो प्रयास आवश्यक छ। पछिल्लो गर्न पहिलो देखि - यो स्कूल तस्वीर को मुद्दा वरिपरि रहन सबै भन्दा राम्रो छ। हल गर्न प्रवेश मा स्कूल सम्बोधन सबै प्रकारको शब्द रेकर्ड हुनेछ ठूलो एल्बम राखे।
स्कूल को वार्षिकोत्सव छुट्टी परिदृश्य विशेष लगनशील तयारी आवश्यक छ। तथापि, विद्यार्थीहरूको पछाडि बोझ राख्नु गर्छन्। स्कूल स्नातकहरूको समावेश, र तिनीहरूले पक्कै पनि मञ्चमा भन्न केहि छ। यदि सम्भव छ भने, तिनीहरूले स्कूल बारेमा फिलिम बाँचे भने, एक भिडियो टेप बनाउन। बस संगीत वर्तमान दिन सोभियत युग को पुरानो स्कूल वर्ष को दृश्य जानेछ। र दृश्य पछाडि, तपाईं स्कूल बारेमा पाठ सार्दा पढ्न कसैले निर्देशन गर्न सक्नुहुन्छ:
"मेरो प्रिय स्कूल ... तपाईं यी तीन शब्द भन्न गर्दा, प्राणी प्रकाश द्वारा, सबै मेरो जीवनमा स्पष्ट र उज्ज्वल हामी यहाँ बाँकी छ, किनभने यी पर्खालहरु भित्र उज्यालो छ। सम्झनाहरू ... चक बोर्ड, आफ्नो डायरी मा टिप्पणीहरू, अनपेक्षित र पाँच संग चित्रित हाम्रो शिक्षकहरूको मुस्कान ... मुस्कान ... हामी तिनीहरूलाई धेरै समस्या कसरी कारण छ, र तिनीहरूले रोगी र हँसिलो थिए ... र हाम्रो सबैभन्दा ठूलो मित्र स्कूल घण्टी थियो। हामीले उहाँलाई लागि पर्खेर, एक छुट्टी रूपमा, साकार छैन प्रत्येक पारित पाठ हामीलाई दिन्छ वयस्क जीवन ... अनि आज हामी धन्यवाद! लागि रवि भन्न चाहनुहुन्छ के तपाईं हामीलाई स्कूल दिनुभयो! अनि तपाईं, शिक्षक! सुझावहरूको लागि, अवलोकन, ज्ञान! धन्यवाद! "
त्यसपछि तपाईँले माथि फेला पार्न आवश्यक छ, र तिनीहरूले चार हुनेछ भने थप सुन्दर हुनेछ - दुई विद्यार्थी र दुई स्नातकहरूलाई को। एक लिपि विगतका स्कूल वार्षिकोत्सव लागि र वर्तमान को, एकांतर गर्न सकिन्छ दृष्य।
स्वाभाविक, हल मा फरक पुस्ताका शिक्षकहरू बस्नेछ। तिनीहरूलाई तपाईँले तिनीहरूले तपाईं वा गर्न जारी राख्न को लागि हुन प्रयोग के मोल भन्ने महसुस गरौं। तिनीहरूलाई लागि फूल बारे मा भूल छैन।
स्कूल वार्षिकोत्सव परिदृश्य स्नातकहरूको विभिन्न पुस्तामा आफ्नो सम्झनाहरु साझा गरिनेछ जसले को बोली समावेश गर्न राम्रो हुनेछ। तथापि, सम्झनाहरु मजा हुनुपर्छ, यो आफ्नो स्कूल वर्ष को रोचक र हास्यास्पद कथाहरू हुनेछ भने राम्रो छ।
लिपि को एक अनिवार्य विशेषता गीत हुनुपर्छ। यो संगीत नै रचना गर्न गाह्रो छ भने, किनभने यो समर्थन प्राप्त गर्न धेरै सजिलो छ, केही चिरपरिचित निरूपण शब्दहरू त्यसपछि पूर्ववत। उदाहरणका लागि, "प्रिय मित्र" Leontief यो उत्सव लागि पूर्ण फिट। पाठ लेखन, केही शब्द परिवर्तन र तपाईं सक्नुभयो।
कि स्कूल वार्षिकोत्सव अक्सर छैन मनाइन्छ सम्झना, त्यसैले सबै राम्रो लिपि स्कूल वार्षिकोत्सव लेख्न, विशेष, राम्रो तरिकाले गर्न प्रयास गर्नुहोस्। उनको फिर्ती एक पटक त्यो हामीलाई दिनुभएको कम्तिमा एक टुक्रा दिन!
रोचक विचार, सिफारिसहरू र समीक्षा: आफ्नो जन्मदिन लागि 40 वर्ष को लागि एक मानिसलाई उपहार
एक महिला को 55 वर्ष को वार्षिकोत्सव मा प्रतियोगिताहरूमा। परिदृश्य जन्मदिन
आफ्नो विवाह को लागि मिति
विश्व दिन अङ्कमाल - सबैभन्दा रमाइलो बिदा को एक
बेलुन को कट्टर - हावा चमत्कार
20 औं वार्षिकोत्सव संग मान्छे गर्न शुभकामना। परिदृश्य जन्मदिन। उपहार
कोरोनरी मुटुको रोग: लक्षण, कारण, रोकथाम
मानिसहरूलाई मा फोक्सो रोग: सिफारिसहरू सूची, लक्षण
Pashmina - यो के हो? Pashmina को प्रकार
टेरी gloxinia मनका: मास्टर क्लास
जहाँ बाथरूम मा मरम्मत सुरु गर्न र कसरी सही तिनीहरूलाई के गर्ने?
खेल प्रेम? तपाईंको छाला को हेरचाह गर्न नबिर्सनुहोस्!
अमेजन सुगा: मालिकको समीक्षा र सामग्रीको subtleties
घर मा स्पार्कल्स र अन्य सजावट संग नाखून डिजाइन।
शरीर को प्रतिरक्षा कसरी वृद्धि गर्न? यो धेरै सरल छ
कसरी व्यक्तिगत उद्यमी बैंक खाता खोल्ने गर्छ
Syanovskie गुफा: जान जाने वा गर्न?
Cannondale बाइक: सबै भन्दा राम्रो मोडेल र समीक्षा एक सिंहावलोकन